[भारत] 'एक्जिट पोल'माथि ममताको टिप्पणी– 'भोटिङ मेसिन गडबड गर्न गसिप चलाइयाे'
नयाँ दिल्ली– भारतमा लोकसभा निर्वाचनअन्तर्गत सात चरणको मतदान सकिएको छ । मतगणना भएर मतपरिणाम आउन ३ दिन बाँकी छ । यद्यपि, भारतीय मिडियहरुले मतदान गरेर निस्किएका मतदातामाझ सर्वेक्षण गरी ‘एक्जिट पोल’को ...
नयाँदिल्ली — भारतमा १७ औं लोकसभा चुनावअन्तर्गत आइतबार सातौं अर्थात् अन्तिम चरणको मतदान सकिएको छ । मतदान पूरा भएलगत्तै सार्वजनिक भएका आधा दर्जन मत सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) का नतिजाले भारतीय जनता पार्ट...
बिज्ञापन काठमाडौं ६ जेठ । भारतमा १७ औं लोकसभा चुनावअन्तर्गत आइतबार सातौं अर्थात अन्तिम चरणको मतदान सकिएको छ । मतदान पूरा भएलगत्तै सार्वजनिक भएका आधा दर्जन मत सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) का नतिजाले भारत...
भारतमा १७ औं लोकसभा चुनावअन्तर्गत आइतबार सातौं अर्थात अन्तिम चरणको मतदान सकिएको छ । मतदान पूरा भएलगत्तै सार्वजनिक भएका आधा दर्जन मत सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) का नतिजाले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको रा...
भारतमा फेरि मोदी नै दोहोरिने प्रक्षेपण
नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो) भारतमा १७ औँ लोकसभा चुनावअन्तर्गत आइतबार सातौँ अर्थात अन्तिम चरणको मतदान सकिएको छ। मतदान पूरा भएलगत्तै सार्वजनिक भएका आधा दर्जन मतसर्वेक्षण (एग्जिट पोल) का नतिजाले भारती...
दक्षिण भारतले यसपटक बनाउला सरकार?
जति–जति लोकसभा चुनावका नतिजा सार्वजनिक हुने दिन अर्थात् मे २३ नजिक आउँदै छ, त्यसैअनुसार राजनीतिक दलहरु रणनीति बनाउन जुटेका छन्। यही कारणले धेरै मानिसलाई लागेको छः यो चुनावमा कुनै पनि दलले स्पष्...
एग्जिट पोलको सुरुआती नतिजा सार्वजनिक : मोदी र गान्धीमा को अगाडी ?
नयाँ दिल्ली । भारतमा एक महिना अघिदेखि जारी लोकसभा निर्वाचन आज सम्पन्‍न भएको छ । ५४२ सिटका लागि भएको निर्वाचन सात चरणमा गरी आइतबार सम्पन्‍न भएको हो । निर्वाचनको परिणाम २३ मे अर्थात बिहीबार सार्वजनिक...
नयाँ दिल्ली । भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाका ५ सय ४३ स्थानका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ । आइतबार सातौं तथा अन्तिम चरणमा केन्द्र शासित चन्डीगढसहित ५९ सिटका लागि मतदान भएसँगै लोकसभा निर्वाचनमा मतदान...
मोदी–शाहको टक्करमा उदाउँदै ममता बनर्जी
एजेन्सी । शक्तिले भ्रष्ट पार्छ र असीमित शक्तिले पूर्ण रूपले भ्रष्ट पार्छ भन्ने एउटा उखान छ । नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको जोडीलाई ममता बनर्जीसँग आमने सामने हुँदा कोसँग बढी शक्ति छ भन्ने कुरा स्पष्ट भ...